I-Luxury 4 Season Waterfront Retreat kwiLake Simcoe
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMatt
Wamkelekile kwi "Cityview Lakehouse", indawo etofotofo yesizini emi-4 ejonge iKempenfelt bay entle echibini laseSimcoe. Ukuba ujonge indawo yokuphumla, ekhumbulekayo kunye neyangoku yokubuyela usapho lwakho olulandelayo, indawo yokuhlala, umsitho wokwakha iqela, okanye ufuna nje utshintsho lwendawo le yindawo yakho!
*** Nceda uqaphele, nayiphi na imibuzo yokuhlala kufuneka ibe nolwazi oluhlaziyiweyo lweprofayili ukuze ivunywe. Kubandakanywa, ifoto yeprofayili kunye ne-ID eqinisekisiweyo. Imibuzo ngaphandle kophononongo iya kujongwa ngokufanelekileyo.***
Ingaphakathi lepropathi lihlaziywe ngokupheleleyo kwaye lizaliswe ngokugqitywa kwangoku kunye nobunewunewu. Uya kufumana amagumbi okulala ama-4, amagumbi okuhlambela ayi-3, ikhitshi enkulu evulekileyo evulekileyo kunye nendawo yokutyela kunye nesauna kwigumbi lokuhlambela elisezantsi.
Kumagumbi okulala ama-4, inkosi inebhedi enkulu eyi-1 yobukhulu, amanye amagumbi amabini aphezulu anebhedi enkulu yokumkanikazi kwigumbi ngalinye, kwaye igumbi lokulala eliphambili libandakanya iibhedi ezimbini.
Itafile yokutyela inegumbi lokukhululeka ukuze ilingane neendwendwe ezisi-8 ngexesha kunye nezihlalo zezinye iindwendwe ezi-4 kwisiqithi sasekhitshini.
Ngasemva kweyadi awuzukufumana nje umbono omhle wecala lamanzi, uya kufumana iqula lomlilo lentsimbi elirhangqwe zizitulo ezi-6 zeMuskoka, ezi-3 ngaphezulu kufutshane nedokhi/umda wamanzi kunye nezinye izitulo ezi-2 ukuba ziyafuneka kwibalcony ephezulu.
Kwigumbi lokulala elikhulu uya kufumana i-walkout ukuya kwindawo entle yomgangatho wesibini enemibono emangalisayo yechibi. Ilungele ikofu yakho yasekuseni.
ICityview Lakehouse ikwintliziyo yeBarrie, kwindlela yabucala nethuleyo yaseKempview. Ipropathi emangalisayo ephambi kolwandle enombono wedolophu yonke iBarrie, iBarrie Marina, iCentennial Beach, njl. Ibekwe kwizinyuko ezikude neMinets Point Park kunye nolwandle, indawo edumileyo yokusefa umoya kunye nemidlalo yasemanzini yokusingwa. Imizuzu yokuqhuba ukusuka edolophini yaseBarrie apho uya kukwazi ukuhambahamba kwindlela yokuhamba kwaye ufumane ezinye zezona venkile zibalaseleyo zikaBarrie, iindawo zokutyela ezisefashonini, iibhari ezibethayo, iivenkile zekofu kunye nezinye izinto ezinomtsalane zalapha ekhaya.
Real Estate investor and contractor that loves the outdoors, and relaxing on the boat.
Ifumaneka ngemeko kaxakeka kuphela.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Barrie